यस्तो घर जहाँ १० घण्टा बिताउँदा पाइन्छ २२ लाख पुरस्कार - tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
यस्तो घर जहाँ १० घण्टा बिताउँदा पाइन्छ २२ लाख पुरस्कार
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:३१ मा प्रकाशित
872 Views पटक पढिएको
काठमाडौं, १६ कार्तिक : भूतघर अर्थात् हन्टेड हाउसका बारेमा धेरै कथा, कहानी तथा फिल्महरु पनि देख्नु सुन्नु भएकै होला । यस्ता हन्टेड हाउसका प्रसंगले मनमा डर, रोमाञ्चकता तथा मनोरञ्जन सिवाय अरु दिने केही होइन । तर अमेरिकामा चाहिँ एउटा यस्तो भुतघर खोलिएको छ, जसमा तपाईंले डरत्रासको मज्जा मात्र होइन पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ ।
टेनिसीको समरटाउनमा स्थापित उक्त हण्टेड हाउसमा १० घण्टा बिताउन सक्नुभयो भने करीब २२ लाख रुपैयाँको पुरस्कार तपाईंको झोलीमा पर्नेछ ।
उक्त हण्टेड हाउसको नाम हो, ‘मे मी म्यानर’ । यो भुतघर भित्रको दृश्यहरु इति भयानक छन् कि त्यहाँ कुनै पनि मानिसका लागि १० घण्टा बिताउनु असम्भव प्रायः जस्तै हुन्छ । तर यदि जसले हिम्मत जुटाएर हण्टेड हाउसभित्र १० घण्टा बिताउँछ उसले २० हजार डलर पुरस्कार पाउँदछ ।
यो हण्टेड हाउसभित्र छिर्नु अगाडि जो कोहीले पनि ४० पेजको करारनामा गर्नुपर्दछ, ता कि भित्र डरका कारण केही भएमा स्वयं व्यक्ति नै जिम्मेवार हुन्छ । साथै घरभित्र जाने मानिसको उमेर २१ वर्षभन्दा कम हुनुहुँदैन । यसका साथै आफू स्वस्थ रहेको मेडिकल सर्टिफिकेट पनि पेश गर्नुपर्दछ ।
यतिमात्र कहाँ हो र, करारनामामा यतिधेरै कडा शर्तहरु हुन्छन् कि घरभित्र छिरिसकेपछि गम्भीर रुपमा शारीरिक वा मानसिक चोट नपरेसम्म बाहिर निस्किन पाइँदैन ।
हण्टेड हाउसभित्र छिरिसकेपछि धेरै मानसिक तथा शारीरिक त्रासदीहरुको सामना गर्नुपर्दछ । त्यसक्रममा मान्छेलाई रिस पनि उठ्नसक्छ, तर रिसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ ।
घरभित्र भूतका मूर्ति मात्र होइन डरलाग्दा पहिरनमा रहेका अन्य मानिसहरुले समेत अचानक अगाडि पछाडि आएर डरलाग्दो वातावरण सिर्जना गर्नेछन् । यसले मानिसलाई साँच्चीकै भूतको फेला परेको भान हुनेछ ।
उक्त हण्टेड हाउसका मालिकका अनुसार अहिलेसम्म कोहीपनि व्यक्तिले उक्त घरभित्र १० घण्टा बिताउन सकेको छैन ।
१४ करोड तलब खाने बैंकर स्यान्डविच चोरेको आरोपमा निलम्बित !
बोइङ्ग ७३७–८०० सँग विवाह गर्दै एक महिला
चन्द्रमामा जान जापानी अर्बपति युसाकु गर्लफ्रेन्डको खोजीमा
आठ वर्षे युट्युबरको कमाइ तीन अर्ब !
धादिङमा भाईरल भालेको अण्डा काण्ड
नितम्बको फोटो पोस्ट गरेर वार्षिक कमाइ १७ करोड !
१३ सय वर्ष पूरानो विश्वकै सबैभन्दा पुरानो होटेल
नाडीबाटै कसरी चोरियो साढे ९ करोडको घडी ?
किन सजाए यी कलाकारले ४४० जोर लेडिज जुत्ताले घर ?
किसानले फलाए ८०३ किलोको फर्सी